မွနျမာ တို့ ပထမဆုံး တရားဝငျထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာ အကွောငျး တစတေ့စောငျး…. - Pyit Time Htaung
Homepage / Knowledge / မွနျမာ တို့ ပထမဆုံး တရားဝငျထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာ အကွောငျး တစတေ့စောငျး….
မွနျမာ တို့ ပထမဆုံး တရားဝငျထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာ အကွောငျး တစတေ့စောငျး….
မွနျမာ ရတေပျ မှ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ နတှေ့ငျပွု လုပျသော ပငျလယျပွငျ စဈရေးလကေ့ငျြမှု (Navy Fleet Exercise 2020)တှငျ ဒီဇယျ-လြှပျစဈစှမျးအငျသုံး Project-877 Kilo class ရငေုပျသငေ်ျဘာ ပိုငျဆိုငျနကွေောငျး တရားဝငျထုတျ ဖျောပွသ ခဲ့သညျ။ ရငေုပျသငေ်ျဘာ အား “မငျးရဲသိင်ျခသူ” ဟု အမညျပေးထားသညျ။
ရငေုပျသေ င်ျဘာအား Single Line Formation ဖွငျ့ ခြီတကျ အလေးပွုစဉျ တှမွေ့ငျရခွငျး ဖွဈသညျ။ လကေ့ငျြ့ရေးတှငျ အသုံးပွုရနျရညျရှယျ၍ အိန်ဒိယရတေပျမှ INS Sindhuvir (S58)အား မွနျမာရတေပျ သို့ လှဲပွောငျးပေး အပျခွငျးဖွဈ သညျ။
မွနျမာ တို့ ပထမဆုံး တရားဝငျထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာ
တနျခြိနျ ၄၀၀၀ ရှိပွီး အရာရှိ/စဈသညျ ၅၂ ဦး လိုကျ ပါ အမှုထမျးသညျဟု ဆိုသညျ။ ရအေောကျ သို့ အမြားဆုံး မီတာ ၃၅၀ ငုပျလြှိုးနိုငျသျောလညျး မီတာ ၃၀၀ အထိ သာ ငုပျလြှိုးရနျ ခှငျ့ပွုထားသညျ။
AIP စနဈ ပါဝငျခွငျးကွောငျ့ ရအေောကျတှငျ ကွာရှညျစှာ ငုပျလြှိုးနိုငျစှမျး ရှိသညျ။ ပငျလယျပွငျတှငျ ၄၅ ရကျ ကွာ တာဝနျထမျးဆောငျနိုငျစှမျး ရှိသညျ။
မွနျနှုနျး အနဖွေငျ့ ရပေျေါတှငျ ရမေိုငျ ၁၀ မိုငျ နှငျ့ ရအေောကျ တှငျ ၁၇ မိုငျ ဆိုသျောလညျး snokel mode ကို အသုံးပွုပါက တဈနာရီ ရမေိုငျ ၉ မိုငျ နှုနျးဖွငျ့ ခုတျမောငျး နိုငျစှမျးရှိသညျ။
အလြား ၇၃ မီတာ ရှိသော ရငေုပျ သငေ်ျဘာ အနဖွေငျ့ ရအေောကျမှ မောငျးနှငျ၍ ရမေိုငျ ၄၀၀ အထိ စဈ ဆငျနိုငျစှမျးရှိသညျ။
မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျ သငေ်ျဘာတှငျ လကျနကျ တပျဆငျမှုအနေ ဖွငျ့ SA-14 Gremlin တာတိုပဈလကွေောငျးရနျ ကာကှယျ ရေးဒုံးမြားအပွငျ အိန်ဒိယပွညျတှငျးထုတျ တာဝေးတျောပီဒို မြားတပျဆငျ ပဈခတျသညျ့အပွငျ ရမွှေပျမိုငျးမြားပါ ဖွနျ့ခငျး ပေးနိုငျသညျ။
အိန်ဒိယရတေပျ မှ Kilo အတနျးအစားဖွဈ သော ရငေုပျသငေ်ျဘာမြားကို ခရုဈဒုံးပြံမြားပဈလှတျနိုငျရေး အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုတှငျ INS Sindhuvir(S58)နောငျတှငျ မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာဖွဈလာမညျ့လညျး ပါဝငျခဲ့သညျ။
ထို့ကွောငျ့ 3M-54 Klub(Kalibr)ခရုဈဒုံးပြံမြားကို လညျး ရငေုပျသငေ်ျဘာမှ ပဈလှတျနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ တရုတျ ပွညျတှငျးထုတျ ရငေုပျသငေ်ျဘာကို ထိုငျးရတေပျမှ မှာယူထား သျောလညျး ၂၀၃၀ မှ ရောကျရှိမညျဖွဈသညျ။
ထပျမံ၍ ၂ စငျး ဝယျယူရနျ စိုငျးပွငျးသျောလညျး ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနေ ကွောငျ့ ရပျဆိုငျးခဲ့ရသညျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရတေပျမှ တရုတျ ပွညျတှငျးထုတျ Ming class တဈပတျရဈ ရငေုပျသငေ်ျဘာ ၂ စီး ကို အရဈကပြေးခစြေနဈဖွငျ့ ဝယျယူသောကွောငျ့ စော စီးစှာပိုငျဆိုငျသျောလညျး
ရငေုပျသငေ်ျဘာအတှကျ အခွခေံ အဆောကျအဦမြား ကွိုတငျမဆောကျထားသောကွောငျ့ ရတေပျဆိပျကမျးတှငျ ကွိုးမြားတားကာ ရပျနားထားရသညျ့ အတှကျ ရငေုပျသငေ်ျဘာ လုံခွုံရေးအတှကျ စိုးရိမျဖှယျအခွေ အနသေို့ ရောကျရှိလြှကျရှိသညျ။
မငျးရဲသိင်ျခသူအား စောငျ့ ကွညျ့ရနျ ထိုငျးတျောဝငျရတေပျမှ ကွိုတငျတာဝနျပေးအပျ ထားပွီးနောကျပိုငျးတှငျ ဘင်ျဂလားရတေပျမှလညျး ခရုဈဒုံး မြားပဈခတျနိုငျသညျ့အပွငျ တာဝေးတျောပီဒိုမြား တပျဆငျ ထားနိုငျသညျ့ အခွအေနကေို မြှျောမှနျးကာ Ming class ရငေုပျသငေ်ျဘာ ၂ စီး အား တရုတျနှငျ့ ထပျမံအဆငျံမွှငျ့တငျမှု မပွီးသေးခြိနျအထိ မွနျမာရပေိုငျနကျအနီး ကငျးလှညျ့ခွငျး မပွုရနျ တာမွဈထားသညျဟု သတငျးရပျကှကျမြားမှ ပွော ဆိုလြှကျရှိသညျ။
Kilo အတနျးအစား ရငေုပျသငေ်ျဘာမြား အနဖွေငျ့ ဒီဇယျ-လြှပျစဈစှမျးအငျသုံးဟုဆိုသျောလညျ ရငေုပျသငေ်ျဘာ၏ အားနညျးခကျြဖွဈသော အသံဆူညံမှုကို လြှော့ခကြာ ရအေောကျတှငျ အသံတိတျဆိတျစှာ ခုတျမောငျးနိုငျသောကွောငျ့ အမရေိကနျရတေပျမှ ခွိမျးခွောကျ မှုပေးစှမျးနိုငျသော ရငေုပျသငေ်ျဘာ အဖွဈသတျမှတျထား သညျ။
မငျးရဲသိင်ျခသူ ရငေုပျသငေ်ျဘာ နှငျ့အတူ ရုရှား၏ နောကျဆုံးမြိုးကှဲ Type-636 Kilo class ရငေုပျသငေ်ျဘာ မြားထပျမံပူးပေါငျးနိုငျသညျဟု စဈရေးကြှမျးကငျြသူမြားက သုံးသပျထားကွသညျ။
မြန်မာ ရေတပ် မှ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ နေ့တွင်ပြု လုပ်သော ပင်လယ်ပြင် စစ်ရေးလေ့ကျင်မှု (Navy Fleet Exercise 2020)တွင် ဒီဇယ်-လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Project-877 Kilo class ရေငုပ်သင်္ဘော ပိုင်ဆိုင်နေကြောင်း တရားဝင်ထုတ် ဖော်ပြသ ခဲ့သည်။ ရေငုပ်သင်္ဘော အား “မင်းရဲသိင်္ခသူ” ဟု အမည်ပေးထားသည်။
ရေငုပ်သေ င်္ဘာအား Single Line Formation ဖြင့် ချီတက် အလေးပြုစဉ် တွေ့မြင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးတွင် အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်၍ အိန္ဒိယရေတပ်မှ INS Sindhuvir (S58)အား မြန်မာရေတပ် သို့ လွှဲပြောင်းပေး အပ်ခြင်းဖြစ် သည်။
တန်ချိန် ၄၀၀၀ ရှိပြီး အရာရှိ/စစ်သည် ၅၂ ဦး လိုက် ပါ အမှုထမ်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ရေအောက် သို့ အများဆုံး မီတာ ၃၅၀ ငုပ်လျှိုးနိုင်သော်လည်း မီတာ ၃၀၀ အထိ သာ ငုပ်လျှိုးရန် ခွင့်ပြုထားသည်။
AIP စနစ် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ရေအောက်တွင် ကြာရှည်စွာ ငုပ်လျှိုးနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင် ၄၅ ရက် ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
မြန်နှုန်း အနေဖြင့် ရေပေါ်တွင် ရေမိုင် ၁၀ မိုင် နှင့် ရေအောက် တွင် ၁၇ မိုင် ဆိုသော်လည်း snokel mode ကို အသုံးပြုပါက တစ်နာရီ ရေမိုင် ၉ မိုင် နှုန်းဖြင့် ခုတ်မောင်း နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အလျား ၇၃ မီတာ ရှိသော ရေငုပ် သင်္ဘော အနေဖြင့် ရေအောက်မှ မောင်းနှင်၍ ရေမိုင် ၄၀၀ အထိ စစ် ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ် သင်္ဘောတွင် လက်နက် တပ်ဆင်မှုအနေ ဖြင့် SA-14 Gremlin တာတိုပစ်လေကြောင်းရန် ကာကွယ် ရေးဒုံးများအပြင် အိန္ဒိယပြည်တွင်းထုတ် တာဝေးတော်ပီဒို များတပ်ဆင် ပစ်ခတ်သည့်အပြင် ရေမြှပ်မိုင်းများပါ ဖြန့်ခင်း ပေးနိုင်သည်။
အိန္ဒိယရေတပ် မှ Kilo အတန်းအစားဖြစ် သော ရေငုပ်သင်္ဘောများကို ခရုစ်ဒုံးပျံများပစ်လွှတ်နိုင်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွင် INS Sindhuvir(S58)နောင်တွင် မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်လာမည့်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် 3M-54 Klub(Kalibr)ခရုစ်ဒုံးပျံများကို လည်း ရေငုပ်သင်္ဘောမှ ပစ်လွှတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တရုတ် ပြည်တွင်းထုတ် ရေငုပ်သင်္ဘောကို ထိုင်းရေတပ်မှ မှာယူထား သော်လည်း ၂၀၃၀ မှ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံ၍ ၂ စင်း ဝယ်ယူရန် စိုင်းပြင်းသော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ်မှ တရုတ် ပြည်တွင်းထုတ် Ming class တစ်ပတ်ရစ် ရေငုပ်သင်္ဘော ၂ စီး ကို အရစ်ကျပေးချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူသောကြောင့် စော စီးစွာပိုင်ဆိုင်သော်လည်း
ရေငုပ်သင်္ဘောအတွက် အခြေခံ အဆောက်အဦများ ကြိုတင်မဆောက်ထားသောကြောင့် ရေတပ်ဆိပ်ကမ်းတွင် ကြိုးများတားကာ ရပ်နားထားရသည့် အတွက် ရေငုပ်သင်္ဘော လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေ အနေသို့ ရောက်ရှိလျှက်ရှိသည်။
မင်းရဲသိင်္ခသူအား စောင့် ကြည့်ရန် ထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ်မှ ကြိုတင်တာဝန်ပေးအပ် ထားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားရေတပ်မှလည်း ခရုစ်ဒုံး များပစ်ခတ်နိုင်သည့်အပြင် တာဝေးတော်ပီဒိုများ တပ်ဆင် ထားနိုင်သည့် အခြေအနေကို မျှော်မှန်းကာ Ming class ရေငုပ်သင်္ဘော ၂ စီး အား တရုတ်နှင့် ထပ်မံအဆင်ံမြှင့်တင်မှု မပြီးသေးချိန်အထိ မြန်မာရေပိုင်နက်အနီး ကင်းလှည့်ခြင်း မပြုရန် တာမြစ်ထားသည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များမှ ပြော ဆိုလျှက်ရှိသည်။
Kilo အတန်းအစား ရေငုပ်သင်္ဘောများ အနေဖြင့် ဒီဇယ်-လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးဟုဆိုသော်လည် ရေငုပ်သင်္ဘော၏ အားနည်းချက်ဖြစ်သော အသံဆူညံမှုကို လျှော့ချကာ ရေအောက်တွင် အသံတိတ်ဆိတ်စွာ ခုတ်မောင်းနိုင်သောကြောင့် အမေရိကန်ရေတပ်မှ ခြိမ်းခြောက် မှုပေးစွမ်းနိုင်သော ရေငုပ်သင်္ဘော အဖြစ်သတ်မှတ်ထား သည်။
မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘော နှင့်အတူ ရုရှား၏ နောက်ဆုံးမျိုးကွဲ Type-636 Kilo class ရေငုပ်သင်္ဘော များထပ်မံပူးပေါင်းနိုင်သည်ဟု စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ထားကြသည်။
Previous post ရှတေိဂုံစတေီတျော ပုံရိပျပျေါတှငျ Project K အဖှဲ့ဖြျောဖွမှေုကိစ်စ အတှကျ သာသနာရေးနှငျ့ယဉျကြေးမှုဝနျကွီးဌာန သတငျးထုတျပွနျခကျြ
Next post ထိုငျဝမျ-အမရေိကနျ လကျနကျရောငျးဝယျမှု သဘောတူညီခကျြကွောငျ့ အကွပျရိုကျရတော့မယျ့ တရုတျကွီး